192.168.8.1 - IMediaLink
The I-Medialink I-router ibonwa njenge-wireless router kuba ibonelela ngoqhagamshelo lwe-Wi-Fi. Ngaphandle kwamacingo okanye i-Wi-Fi ivumela nje ukunxibelelana nezixhobo ezininzi umzekelo oomabonakude abakhaliphileyo, iiprinta ezingenazingcingo, kunye ne-Wi-Fi evumelekileyo ii-smartphones.
Iingcebiso ngePassword ye-MediaLink:
Khetha i-passkey entsonkothileyo kunye nobunzima bokuqikelela kwiMediaLink yakho oya kuthi uyikhumbule.
Kufuneka ibe yinto eyimfihlo, umzekelo [imeyile ikhuselwe], kuthetha ukuba awunakuze usilele ukuyikhumbula.
Umthamo wokhuseleko uxhomekeke ngqo kubunzima bokungena, kunye neenzame ezithathiweyo zokukhusela i-passkey ye-router yakho.
Nika i-Passkey ye-router oya kuyikhumbula (ukusebenza kuqala). Ngaphandle kokuthetha, unokwenza i-passkey eyindida enabalinganiswa abohlukeneyo, amanani, isiGrike kunye nesi-latin. Nangona kunjalo ekugqibeleni uya kugqiba ukuyifaka kwi-sticky kwaye uyibeke kwi-router ebetha injongo.
Igama elingagqibekanga le-Wifi (SSID) kunye nePaskey kunye nokudibanisa ukuguqulelwa kwenethiwekhi
Ingcebiso encinci eyongezelelweyo (njengoko ingenampembelelo kukhuseleko), kukutshintsha igama elingagqibekanga le-Wifi (SSID) njengoko kuya kuqondakala ngakumbi kwabanye ukuba bazi ukuba yeyiphi inethiwekhi abadibanisa kuyo.
• Khangela - Ukusetha okuPhambili (kufunyenwe kwibhokisi yemenyu phezulu kwiphepha lasekhaya), kwaye ucinezele kuyo
• Khangela - Ukusetha ngaphandle kwamacingo (kubonwe kwibhokisi yemenyu phezulu kwiphepha lasekhaya), kwaye uyibethe kuyo
• Khangela i-Basic Basic Setting (ibonwa kwibhokisi yemenyu phezulu kwiphepha lasekhaya), kwaye uyibethe
Khangela amagama eNethiwekhi (i-SSID), eli ligama le-Wi-Fi leRouter. Emva kokuba ubhale igama lenethiwekhi, kuya kufuneka uvumele ukubethela kwe-WPA2-PSK kwi-router. Lo ngowona mgangatho unzima we-encryption ofumaneka kwinethiwekhi esekwe ekhaya.
Ukufaka i-WPA yokwahlula-hlula isitshixo / i-WI-Fi Passkey- le yipaski oyakuyisebenzisa ukunxibelelana ne-Wi-Fi esekhaya. Yenze ifonti eyi-15-20 kwaye ungasebenzisi ipaski efanayo oyisebenzisele ukungena ngemvume kwi-MediaLink.
Iingxaki zokungena kwiMediaLink:
ImediaLink Passkey ayisebenzi
Iipaski zifumana indlela yokungasebenzi! Okanye, kwimisitho emininzi, abathengi bafumana indlela yokungabakhumbuli. Kuzo zombini iimeko, jonga phezulu "Ungayibuyisela njani kwakhona indlela ye-MediaLink Router to Default Setting".
Ulibale ukudlula kwiMediaLink Router
Nokuba utshintshe amagama asetyenziswayo okanye amagama agqithisiweyo eMediaLink kwaye ulibale, jonga nje "Ungayibuyisela njani kwakhona indlela ye-MediaLink Router to Default Setting".
Cwangcisa umzila useto olungagqibekanga
Njengokuba, ukhuseleko lwenethiwekhi lubalulekile, owokuqala kunye nomsebenzi ophambili kukutshintsha i-MediaLink router Default Login & Passkey iye kwinto ekhuselekileyo kunye neyakho.
Landela imiyalelo yokungena kwiRouted Medialink.
Qhagamshela i-router yocingo kwi-Laptop okanye kwi-PC. …
Ndwendwela isikhangeli sewebhu sokhetho kwaye ubhale idilesi ye-IP yendlela ye-Medialink kwibhokisi yedilesi. …
Emva koko bhala amagama asetyenziswayo kunye negama lokugqitha le-router ukufikelela kwi-admin admin. Ngoku ungene.
iindidi uhlobo Post yokukhangela